भगवान फादर, विश्वव्यापी चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
परमेश्वर, पिता, देवताको पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उत्पत्तिविहीन व्यक्ति, जसबाट पुत्र धेरै युगौं अघि जन्मेको थियो र जसबाट पवित्र आत्माले पुत्रको माध्यमबाट सदासर्वदा अगाडि बढ्नुहुन्छ। पिताले, जसले पुत्र मार्फत देखिने र अदृश्य सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो, पुत्रले बाहिर पठाउनुभयो ताकि हामी उद्धार प्राप्त गर्न सकौं र पवित्र आत्मालाई हाम्रो नविकरण र परमेश्वरका सन्तानको रूपमा स्वीकार्यताको लागि। (यूहन्ना १.१.१1,1.14, १;; रोमी १ 18..15,6; कलस्सी १.१1,15-१-16; यूहन्ना 3,16.१14,26; १.15,26.२8,14; १.17.२17,28; रोमी .XNUMX.१XNUMX-१; प्रेरित १.XNUMX.२XNUMX)
हाम्रोलागि ईसाईको रूपमा, सबैभन्दा प्राथमिक विश्वास भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। "भगवान" द्वारा - कुनै लेख बिना, कुनै थप थप बिना - हामी बाइबलका परमेश्वर हुनुहुन्छ: एक असल र शक्तिशाली आत्मा हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, जो हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, जो हामीसँग नजिक हुनुहुन्छ, हामी केमा छ र के हाम्रो जीवनमा छ कार्य गर्दछ र हामीलाई उहाँको भलाईको साथ सदाको लागि प्रस्ताव गर्दछ।
यसको सम्पूर्णतामा, भगवानले व्यक्तिले बुझ्न सक्नुहुन्न। तर हामी सुरु गर्न सक्दछौं: हामी ईश्वरको ज्ञानको निर्माण ब्लकहरू स collect्कलन गर्न सक्दछौं जसले हामीलाई उहाँको चित्रको आधारभूत सुविधाहरू पहिचान गर्न दिनुहोस् र परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको लागि पहिलो राम्रो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुहोस्। आउनुहोस्, हामी परमेश्वरका गुणहरूमा ध्यान केन्द्रित गरौं, जो एक नयाँ विश्वासी, उदाहरणका लागि, विशेष गरी सहयोगी हुन सक्छ।
धेरै मानिसहरू - लामो समयदेखि विश्वासीहरू पनि - परमेश्वरको अस्तित्वको प्रमाण चाहन्छन्। सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने ईश्वरको कुनै प्रमाण छैन। प्रमाणको तुलनामा प्रमाण वा संकेतको बारेमा कुरा गर्नु राम्रो हो। प्रमाणले हामीलाई निश्चित गर्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको स्वभावले बाइबलले उहाँबारे बताएको कुरासित मेल खान्छ। पावलले “लिस्त्राका अन्यजातिहरूलाई घोषणा गरे” (प्रेरित १:)) आत्म गवाही - यो के हो?
सिर्जना भजन १:: १ भन्छ: "स्वर्गले परमेश्वरको महिमा बताउँछ ..." रोमी १:२० मा यसो भनिएको छ:
किनभने ईश्वरको अदृश्य अस्तित्व, जुन उहाँको अनन्त शक्ति र देवता हो, संसारको सृष्टि भएदेखि नै उहाँका कार्यहरूबाट देखिएको छ ... ation सृष्टि आफैले पनि ईश्वरको बारेमा केही बताउँछ।
कारण कारणहरूले सुझाव दिन्छ कि केहि चीजले पृथ्वी, सूर्य र ताराहरुलाई उद्देश्यपूर्ण बनाएको छ। विज्ञानका अनुसार, ब्रह्माण्ड एक ठूलो धमाकाको साथ शुरू भयो; कारण केहि विश्वास गर्न को लागी केहि केहि धमाका भयो। त्यो कुरा - हामी विश्वास गर्छौं - परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
योजना निर्माणले शारीरिक नियमहरूको, अर्डरको स shows्केत देखाउँदछ। यदि पदार्थको केही आधारभूत गुणहरू थोरै फरक थिए भने, यदि पृथ्वीको अस्तित्व थिएन भने, मानवहरू अवस्थित हुन सक्दैनन्। यदि पृथ्वीसँग फरक आकार वा फरक कक्षा थियो भने, हाम्रो ग्रहमा सर्तहरूले मानव जीवनलाई अनुमति दिँदैन। कसै-कसैले यसलाई एक ब्रह्माण्डिक संयोग ठान्छन्; अरूहरू यसलाई व्याख्या गर्न अझ बढी उचित ठान्छन् कि सौर्यमण्डल एक बुद्धिमान सर्जकले योजना गरेका थिए।
LEBEN अविश्वसनीय जटिल रासायनिक कच्चा माल र प्रतिक्रियाहरूमा आधारित छ। कसै-कसैको विचारमा जीवनलाई “बौद्धिक कारणले” हुन्छ; अरूहरू यसलाई संयोग ठान्छन्। कसै-कसैले विश्वास गर्छन् कि विज्ञानले एक दिन "परमेश्वरबिना" जीवनको उत्पत्ति प्रमाणित गर्दछ। धेरै व्यक्तिको लागि भने जीवनको अस्तित्व सृष्टिकर्ता ईश्वरको स .्केत हो।
Man स्वयं प्रतिबिम्ब छ। उसले ब्रह्माण्डको अन्वेषण गर्दछ, जीवनको अर्थको बारेमा सोच्छ, सामान्यतया अर्थ खोजी गर्न सक्षम हुन्छ। शारीरिक भोकले खानाको अस्तित्वलाई जनाउँछ; तिर्खाले सुझाव दिन्छ कि त्यहाँ त्यस्तो चीज छ जुन तिर्खा मेट्न सक्छ। अर्थको लागि हाम्रो आध्यात्मिक चाहनाले अर्थ वास्तवमा अवस्थित छ र फेला पार्न सकिन्छ भन्ने स suggest्केत दिन्छ? धेरै मानिसहरूले परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अर्थ पाएको दाबी गर्छन्।
नैतिकता के सहि र गलत गलत राय मात्र हो वा बहुमतको प्रश्न हो, वा त्यहाँ कुनै मानिस भन्दा माथि एक अधिकार छ कि राम्रो र नराम्रो मान्दछ? यदि त्यहाँ ईश्वर छैन भने, मानिससँग कुनै कुरालाई खराब भन्नुको कुनै आधार छैन, जातिवाद, नरसंहार, यातना र यस्तै अत्याचारको निन्दा गर्ने कुनै कारण छैन। दुष्टको अस्तित्व एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर संकेत छ। यदि यो अवस्थित छैन भने, शुद्ध शक्तिले शासन गर्नुपर्दछ। कारणहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको कारण हो।
भगवान कस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ? हामी कल्पना गर्न भन्दा ठूलो! यदि उनले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो भने उहाँ ब्रह्माण्ड भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ - र समय, ठाउँ र उर्जाको सीमाको अधीनमा छैन, किनकि यो समय, अन्तरिक्ष, पदार्थ र उर्जाभन्दा पहिले अस्तित्वमा थियो।
२ तिमोथी १: ले परमेश्वरले "समय भन्दा पहिले" के गर्नुभयो भनेर बताउँछ। समय सुरु भएको छ, र भगवान पहिले पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। यो कालातीत अस्तित्व छ जुन वर्षहरूमा मापन गर्न सकिदैन। यो अनन्त हो, अनन्त युग - र अनन्त प्लस धेरै अरब अझै अनन्त हो। हाम्रो गणित तिनीहरूको सीमामा पुग्छ यदि तिनीहरू भगवानको अस्तित्व वर्णन गर्न चाहन्छन्।
किनकि परमेश्वरले पदार्थ सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ पदार्थभन्दा पहिले अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफैंमा भौतिक हुनुहुन्नथ्यो। यो आत्मा हो - तर यो आत्माबाट "बनेको" हुँदैन। परमेश्वर कुनै कुराले बनाउनुभएको होइन; यो सरल छ र यो एक आत्माको रूपमा अवस्थित छ। ऊ अस्तित्व परिभाषित गर्दछ, ऊ आत्मा परिभाषित गर्दछ र उसले मामला परिभाषित गर्दछ।
परमेश्वरको अस्तित्व पदार्थ भन्दा पर जान्छ र पदार्थको आयाम र गुणहरू उहाँमा लागू हुँदैनन्। यो माईल र किलोवाट मापन गर्न सकिदैन। सुलेमान स्वीकार्छन् कि सर्वोच्च स्वर्गले पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्दैन (१ राजा :1:२:8,27)। यसले स्वर्ग र पृथ्वी भर्दछ (यर्मिया २:23,24:२); यो जताततै छ, यो सर्वव्यापी छ। ब्रह्माण्डमा कुनै ठाउँ छैन जहाँ यो अवस्थित छैन।
भगवान कत्तिको शक्तिशाली हुनुहुन्छ? यदि उसले ठूलो धमाधम ट्रिगर गर्न सक्दछ भने, डीएनए कोड सिर्जना गर्न सक्ने सौर्य प्रणालीहरूको डिजाइन गर्न, यदि उनी शक्तिको यी सबै स्तरहरूमा "सक्षम" छ भने, तब उसको हिंसा वास्तवमा असीमित हुनुपर्दछ, तब ऊ सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ। "किनकि परमेश्वरसित कुनै कुरा असम्भव छैन," लूका १.1,37 बताउँछ। परमेश्वर आफूले चाहेको जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
परमेश्वरको रचनात्मकताले एउटा बौद्धिकता देखाउँदछ जुन हाम्रो समझभन्दा बाहिरको छ। उहाँ ब्रह्माण्ड नियन्त्रण र हरेक सेकंड यसको निरन्तर अस्तित्व सुनिश्चित (हिब्रू १०: २)) यसको मतलब उसले बुझ्न सक्दछ कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा के भइरहेको छ; उसको बौद्धिकता असीमित छ - उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। सबै जान्न, जान्न, अनुभव गर्न, जान्न, चिन्न, उसले अनुभव गर्दछ।
किनकि परमेश्वर सही र गलत परिभाषित गर्नुहुन्छ, उहाँ परिभाषित रूपमा सही हुनुहुन्छ र सधैं सही गर्ने शक्ति छ। «किनकि परमेश्वर दुष्टको प्रलोभनमा पर्नुहुन्न» (याकूब :1,13:१) यो उच्च नतीजामा हो र पूर्ण रूपमा (भजन .11,7..XNUMX) उसको स्तर सही छ, उसका निर्णयहरू सही छन्, र उसले विश्वको निष्पक्ष न्याय गर्दछ किनकि ऊ मूलत: राम्रो र सही छ।
यी सबै मामिलाहरूमा, परमेश्वर हामीभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ कि हामीसँग खास शब्दहरू छन् जुन हामीहरू परमेश्वरसँग मात्र प्रयोग गर्दछौं। केवल भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अनन्त हुनुहुन्छ। हामी कुरा गर्दैछौं; ऊ आत्मा हो। हामी मर्छौं; उहाँ अमर हुनुहुन्छ। हामी र परमेश्वर बीचको प्रकृतिमा यस भिन्नतालाई, यो भिन्नतालाई, उहाँको पार भन्दछौं। उहाँ हामीलाई "पार" गर्नुहुन्छ, अर्थात् उहाँ हामीभन्दा टाढा जानुहुन्छ, उहाँ हामी जस्तो हुनुहुन्न।
अन्य पुरातन संस्कृतिहरू देवीदेवताहरूमा विश्वास गर्थे जसले एक अर्कासँग लडे, जसले स्वार्थी व्यवहार गर्‍यो, जसलाई भरोसा गर्न सकिदैन। अर्कोतर्फ, बाइबलले परमेश्वर प्रकट गर्नुहुन्छ जसले पूर्ण नियन्त्रण राख्नुहुन्छ, जसलाई कसैबाट केही पनि आवश्यक पर्दैन र जसले केवल अरूलाई सहयोग पुर्‍याउने काम गर्दछ। ऊ पूर्णरुपमा स्थिर छ, उसको व्यवहार न्यायिक र विश्वासनीय छ। यो नै बाइबलको अर्थ हो जब यसले परमेश्वरलाई "पवित्र" भन्छ: नैतिक तवरले सिद्ध।
त्यसले जीवनलाई धेरै सजिलो बनाउँदछ। तपाईंले अब दस वा बीस विभिन्न देवताहरूलाई खुशी पार्न प्रयास गर्नुपर्दैन; त्यहाँ एक मात्र छ। सबै कुराको सृष्टिकर्ता अझै पनि सबै कुराको शासक हो र ऊ सबै मानिसका न्यायाधीश हुनेछ। हाम्रो विगत, हाम्रो वर्तमान र हाम्रो भविष्य सबै एकै परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, शाश्वत द्वारा निर्धारित गरिन्छ।
यदि हामी केवल भगवान्‌लाई जान्दछौं कि उहाँ हामीमाथि असीमित शक्ति हुनुहुन्छ भने, हामी सम्भवतः डराएको, घुँडा टेक्ने र विद्रोही हृदयले उहाँको आज्ञा पालन गर्नेछौं। तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको प्रकृतिको अर्को पक्ष प्रकट गर्नुभयो: अविश्वसनीय महान परमेश्वर पनि अविश्वसनीय दयालु र राम्रो हुनुहुन्छ।
एक चेलाले येशूलाई सोधे: "प्रभु, हामीलाई पिता देखाउनुहोस् ..." (यूहन्ना १:14,8:१) ऊ जान्न चाहन्थ्यो कि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ। उनले जलिरहेको पोथ्रा, सीनैको आगो र बादलको खामोको कथा सुने, इजकिएलले देखेको बेबिलोन सिंहासन, एलियाले सुनेको आवाज (प्रस्थान::;; १ 2:२१; १ राजा १ :3,4: १२; इजकिएल १) ईश्वर यी सबै पदार्थहरूमा देखा पर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँ वास्तवमै कस्तो हुनुहुन्छ? हामी कसरी उसलाई कल्पना गर्न सक्छौं?
"जसले मलाई देख्छ उसले बुबालाई देख्छ," येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना १:14,9:१) यदि हामी भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भनेर जान्न चाहन्छौं भने हामीले येशूलाई हेर्नु पर्छ। हामी प्रकृतिबाट परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं; पुरानो नियममा यो कसरी प्रकट हुन्छ भन्नेबाट भगवानको थप ज्ञान; तर धेरैजसो परमेश्‍वरको ज्ञान येशूमा आफैले कसरी प्रकट गर्नुभयो त्यसबाट।
येशू हामीलाई प्रकृतिको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाउँनुहुन्छ। उहाँ इमान्वेल हुनुहुन्छ, यसको मतलब "हामीसँग परमेश्वर" हुनुहुन्छ। (मत्ती 1,23।।) उहाँ बिना पाप र स्वार्थबिना बाँच्नुभयो। अनुकम्पाले उसलाई व्याकुल बनायो। उसले प्रेम र आनन्द, निराशा र क्रोध महसुस गर्दछ। ऊ व्यक्तिको ख्याल राख्छ। उसले न्यायको लागि आह्वान गर्छ र पापलाई क्षमा गर्छ। उनले कष्ट र मृत्युलगायत अरूको सेवा गरे।
त्यो भगवान हुनुहुन्छ। उनले आफैंलाई मोशाको बारेमा यसरी वर्णन गरिसकेका छन: "प्रभु, प्रभु, परमेश्वर, दयालु, अनुग्रही, धैर्यवान र महान अनुग्रह र निष्ठाका, जसले हजारौं अनुग्रहहरू राख्नुहुन्छ र अधर्म, अपराध र पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, तर ऊ कसैलाई सजाय नदिई छोड्छ ..." (प्रस्थान, 2, 34--।)
सृष्टिभन्दा माथि खडा हुने परमेश्वरसँग पनि सृष्टिमा काम गर्ने स्वतन्त्रता छ। यो उहाँको विशालता हो, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ ब्रह्माण्ड भन्दा ठूलो छ र ब्रह्माण्ड मा जताततै उपस्थित छ, उहाँ "हाम्रो साथ" एक तरिकामा "अविश्वासीहरु" संग छैन। शक्तिशाली परमेश्वर सधैं हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। यो निकट र एकै समयमा टाढा छ (यर्मिया २:23,23:२)
येशू मार्फत उनले मानव इतिहास, ठाउँ र समय प्रवेश गरे। उहाँ शारीरिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई शरीरमा जीवन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर देखाउनुभयो, र परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई शरीरभन्दा माथि उठाउन चाहानुहुन्छ भनेर देखाउनुभयो। अनन्त जीवन हाम्रो लागि प्रस्ताव गरिएको छ, शारीरिक सीमा भन्दा पर जीवन जुन अब हामी जान्दछौं। आत्मा-जीवन हामीलाई प्रस्ताव गरिएको छ: परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउँदछ, हामीभित्र वास गर्दछ र हामीलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउँछ (रोमी :8,11:११; १ यूहन्ना:: २) परमेश्वर सधैं हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अन्तरिक्ष र समयमा हामीलाई सहयोग गर्न।
महान् र शक्तिशाली परमेश्वर मायालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ; उत्तम न्यायाधीश एकै समयमा दयालु र धैर्यता उद्धारक हो। परमेश्वर जो पापसँग रिसाउनुहुन्छ, त्यसले पापबाट पनि मुक्ति प्रदान गर्दछ। उहाँ अनुग्रहमा अद्भुत, दयालु हुनुहुन्छ। यो व्यक्तिबाट भिन्न हुँदैन जसले DNA कोडहरू सिर्जना गर्न सक्छ, इन्द्रेणीको रंगहरू, डन्डेलियन फूलको तल तल। यदि परमेश्वर दयालु र मायालु हुनुहुन्न भने, हामी अवश्य पनि हुने थिएनौं।
परमेश्वर हामीसंगको सम्बन्धलाई विभिन्न भाषिक छविहरूको माध्यमबाट वर्णन गर्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, कि उहाँ बुबा हुनुहुन्छ, हामी बच्चाहरू हौं; उहाँ श्रीमान् र हामी एक सामूहिक रूपमा, उनकी श्रीमती; उहाँ राजा र हामी उनका प्रजाहरू; उहाँ गोठालो हुनुहुन्छ र हामी भेडा। यी भाषिक छविहरूमा के समानता छ भने परमेश्वर आफैंलाई एक जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ जसले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ र आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ।
भगवान्‌ जान्नुहुन्छ कि हामी कत्ति सानो छौं। उहाँलाई थाहा छ कि उहाँ हामीलाई औंलाहरु को एक तस्वीर संग, ब्रह्माण्ड शक्ति को एक छोटे से गलत हिसाब संग सफा गर्न सक्छ। तथापि, येशू हामीलाई परमेश्वर हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र उहाँ हाम्रो चासो राख्नुहुन्छ भनेर देखाउनुहुन्छ। यदि त्यसले हामीलाई सहयोग गर्यो भने पनि येशू कष्टमा पर्न नम्र हुनुहुन्थ्यो। हामीले भोग्ने पीडा उहाँ जान्नुहुन्छ किनकि उसले आफैंले कष्ट झेल्यो। हामीलाई थाहा छ कि हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौं भनेर त्यसले हामीलाई यो देखाउँदछ कि खराबीले ल्याएको पीडा त्यो आफैले आफैंमा लिएको छ।
भगवानले हाम्रो लागि योजना बनाउनुभएको छ किनकि उहाँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो (संख्या ११:२:1)। उहाँ हामीलाई उहाँसँग अनुकूल हुन आग्रह गर्नुहुन्छ - दयामा, शक्ति मा होइन। नम्रता, निस्वार्थ सेवा, प्रेम र अनुकम्पा, विश्वास र आशाको उदाहरण: येशूमा ईश्वरले हामीलाई एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ जुन हामीले अनुकरण गर्न सक्दछौं र गर्नु पर्छ।
"परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ," जोहानेस लेख्छन् (१ यूहन्ना :1:१:4,8)। हाम्रो पापको लागि येशूलाई मर्न पठाउँदै ऊ हामीप्रति आफ्नो प्रेम देखाउँदछ, ताकि हामी र परमेश्वरबीचको अवरोध खस्कन सक्छ र अन्ततः हामी उहाँसँग अनन्त आनन्दमा बाँच्न सक्छौं। परमेश्वरको प्रेम ईच्छा सोचाइ छैन - यो त्यस्तो काम हो जसले हामीलाई हाम्रो गहिरा आवश्यकताहरूमा मद्दत गर्दछ।
हामी उहाँको बारेमा पुनरुत्थान भन्दा येशूका क्रूसमा परमेश्वरबारे अझ बढी सिक्छौं। येशू हामीलाई देखाउनुहुन्छ कि परमेश्वर पीडा भोग्न इच्छुक हुनुहुन्छ, र पीडित पनि उसले सहायता गरिरहेको मान्छेले गर्दा। उनको प्रेम कल, प्रोत्साहन। उहाँ हामीलाई उहाँको इच्छा गर्न बाध्य पार्नुहुन्न।
हामीप्रति परमेश्वरको प्रेम, जुन येशू ख्रीष्टमा प्रस्टै देखाइएको छ, त्यो हाम्रो उदाहरण हो: «यो प्रेम हो: हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभएन, बरु उसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा छोरालाई हाम्रा पापहरूका लागि मिलाप गर्न पठाउनुभयो। प्रिय मित्रहरु, यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु हुन्छ भने हामीले एक अर्कालाई पनि प्रेम गर्नुपर्दछ » (१ यूहन्ना:: १०-११) यदि हामी प्रेममा बाँचिरहेका छौं भने, अनन्त जीवन हाम्रो लागि मात्र नभई वरपरका मानिसहरूलाई पनि हर्षोल्लास हुनेछ।
यदि हामी जीवनमा येशूलाई पछ्याउँछौं, हामी उहाँलाई पछ्याउनेछौं मृत्यु र त्यसपछि पुनरुत्थानमा। यही परमेश्वर जसले येशूलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो, उहाँ पनि हामीलाई जीवित पार्नुहुनेछ र हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ (रोमी :8,11:११)। तर यदि हामीले प्रेम गर्न सिकेनौं भने हामी अनन्त जीवनको आनन्द लिने छैनौं। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउनुहुन्छ, जुन गतिलाई हामीले अगाडि राख्न सक्दछौं, उहाँ हाम्रो अगाडि रहेको एउटा आदर्श उदाहरण मार्फत, हामीभित्र काम गर्ने पवित्र आत्माको माध्यमबाट हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ। सूर्यको आणविक रिएक्टरहरूमाथि प्रभुत्व जमाउने शक्तिले हाम्रो हृदयमा मायाले काम गर्दछ, हाम्रो लागि हर्ष गर्दछ, हाम्रो स्नेह जित्छ, हाम्रो वफादारी जीत गर्दछ।
परमेश्वरले हामीलाई जीवनको अर्थ दिनुहुन्छ, जीवनमा अभिमुखीकरण, अनन्त जीवनको आशा। हामीले उहाँमा भरोसा गर्न सक्छौं, असल काम गरेकोले दुःख भोग्नु परे पनि। उहाँको भलाइ पछाडि परमेश्वरको भलाई छ; उहाँको प्रेम उहाँको बुद्धिले डो .्याउँछ। ब्रह्माण्डका सबै शक्तिहरू उहाँको आदेशमा छन् र उहाँले तिनीहरूलाई हाम्रो उत्तमको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि सबै थोकले उत्तम सेवा गर्दछ ... » (रोमी :8,28:११)।
हामी कसरी ईश्वरलाई जवाफ दिनेछौं, यती महान् र दयालु, भय terrible्कर र अनुकम्पापूर्ण? हामी आराधनासहित यसको जवाफ दिन्छौं: उहाँको महिमाप्रति श्रद्धा, उहाँका कार्यहरूको लागि प्रशंसा, उहाँको पवित्रताप्रति श्रद्धा, उहाँको शक्तिको आदर, उहाँको सिद्धताको लागि पश्चाताप, हामीलाई उहाँको सत्यता र बुद्धिले पाएको अख्तियारको अधीनता।
हामी उहाँप्रति कृतज्ञताका साथ जवाफ दिन्छौं; उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रेम संग उहाँको भलाइ मा। हामी उसको सराहना गर्छौं, हामी उनको आराधना गर्छौं, हामी उहाँसंग आत्मसमर्पण गर्छौं जुन हामीसंग अझ बढी दिने थियो। जब त्यसले हामीलाई आफ्नो प्रेम देखाउँदछ, हामीले उसलाई परिवर्तन गरौं ताकि हामी वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रेम गरौं। हामी आफूसँग भएका सबै थोक प्रयोग गर्छौं, हामी सबै थियौं, येशूको उदाहरण पछ्याएर अरूको सेवा गर्न उहाँले हामीलाई दिनुहुने सबै कुरा।
हामी प्रार्थना गर्छौं कि परमेश्वर हामी प्रत्येक कुरा सुन्नुहुन्छ। यो जान्नुहुन्छ कि हामीलाई प्रत्येक बिचार थाहा छ, हामीलाई के चाहिन्छ भनेर जान्नुहुन्छ, हाम्रो भावनाहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, उहाँ हामीसँग सँधै बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा, उहाँसँग हामीलाई प्रत्येक चाहना र बुद्धि नगर्न शक्ति छ। येशू ख्रीष्टमा, परमेश्वर विश्वासी हुनुहुन्छ। परमेश्वर सेवाको लागि हुनुहुन्छ, स्वार्थी हुनको लागि होइन। उहाँको शक्ति सधैं प्रेम मा प्रयोग भएको छ। हाम्रो परमेश्वर शक्तिमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ र प्रेममा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। हामी उहाँमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छौं।